बिचार/बिश्लेषण Archives - SangaloKhabar
शुक्रबार, पौष ०२, २०७८
म संर्घष र शैक्षिक उपलब्धिलाई सँगसँगै लाने प्रयत्न गरिरहेको एक युवा प्रतिनिधी पात्र हुँ । समाजशास्त्रको एक विद्यार्थी भएको नाताले शिक्षकले नारीवादका विषयमा अध्ययन गराइरहँदा वा साथीहरुबीच छलफल गरिरहँदा महिला कसरी दोस्रो दर्जाको रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ? भन्ने जिज्ञासाको उचाई चुलिएको थियो । म र मेरो साथी कार्यलयको काम सकेर कटमिरो साँझमा घर फकिँदै गर्दा बाटोमा एक गर्भवती महिला छट्पटिँदै गरेको अ...
देशकै ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) ले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन तामझामको साथ चितवनस्थित नारायणी नदीको तीरमा पाँच लाख कार्यकताहरु उतार्दै तीन दिनसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौंको गोदावारीबाट प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एमाले) मूलत चितवनमा हुने महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा केन्द्रीत रहनेछ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नेकपा (एमाले) २०७५ जेष्ठ २ अगाडिको नेकपा एमाल...
धनकुटामा विद्युत लाईन विस्तारमा प्रयोग भएका १० हजार भन्दा बढी पोल जीर्ण छन् । यो विद्युत प्राधिकरण धनकुटाको तथ्यांकले नै देखाउँछ । गाउँ–गाउँसम्म विद्युत लाइन विस्तारमा बर्षौ अघिदेखि प्रयोगमा आएका यी पोलहरु अहिले मक्किएका छन्, भाँचिन लागेका छन् । कतिपय भाँचिएर दुर्घटना पनि निम्तिदै आएको छ । चौविसे गाउँपालिका–२ स्थित जंग सामुदायिक बनमा गत असोज ८ गते विद्युतको पोल ढलेर लत्रिएको तारबाट करेन्ट लाग्दा...
युवा शक्तिको महत्व र भूमिका
प्राक्कथन: ‘अब त ढिलो हुन्छ की साथी हो, बन्दैन देशले आफै बुझ्नु जाती हो ।’ गायक हेमन्त शर्माको स्वर, संगीत र शब्द रहेको यस गीतको सन्देशले वास्तवमा हामी नेपालीहरुले अब ढिला गर्नु हुदैन आफ्नो देशको विकासको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु पर्ने बेला भएको छ, सिंगो देशले बिकासको मुहार फेर्न खोजिरहेको छ । हामी नौं जवानहरुको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ । यस आलेखको मूल बिषयमा जानुभन्दा पहिले केही देशको...
एकीकृत चिकित्सा सेवा, आजको आवश्यकता
मानिस प्रकृतिको उपज हो । प्रकृति र मावनबिचमा सामञ्जस्यता भएको खण्डमा मानव जीवन प्राकृतिक नियममा सामान्य रुपमा सुचारु भई नै रहन्छ । तर, जीवन शैलीमा अप्राकृतिक प्रभाव बढ्न थालेपछि अनेक प्रकारका अप्राकृतिक विपत्तिहरुले सताउन सक्छ । प्राकृतिक रुपमा उपलव्ध विभिन्न औषधीजन्य र शरिरको आन्तरिक वा वाह्य रुपमा प्रयोगजन्य अन्य प्राकृतिक वस्तुहरुलाई प्रयोग गरी उपचार गरिने विधि प्राकृतिक उपचार विधि हो । होमि...
ओहो त्यो पेट दुखाई , अहिले पनि त्यो सम्झदा जिउ सिरिगं हुन्छ । पीडाले प्राण नै निस्केला जस्तो मेरो छटपटाहट अनि त्यसको केहि बेरमा बेहोसतुल्य भएको मेरो शरीर । रक्तचाप घटेर ८०/४० भएपछि रिगंटा र कमजोरीले एक साथ गाजेको मलाई । अनि त्यसमाथि हस्पिटल पुगेर गाइने ओपिडी, सर्जरी ओपिडी अनि मेडिकल ओपिडी चाहार्दै भिडियो एक्स–रे को कोठामा मात्र बिताएको दुई घण्टा । ओ माइ गड, त्यो दिन अर्थात २०७८ बैशाख ८ गतेको दिन...
कथा सङ्ग्रह “याम्बुनेर” पढेपछि…
“याम्बुनेर” कथा सङ्ग्रह । बिना थिङ, एक सामान्य तामाङ महिलाले लेखेको सामाजिक घटनामा आधारित कथाहरुको सङ्ग्रह । कथाकारको कुनै पनि कथा यसअघि कहिल्यै पढेको थिइन । तर, यो कथा सङ्ग्रहको नामले यसप्रति चाख बढायो । “याम्बु” तामाङ भाषामा राजा बस्ने गाउँ । अर्थात काठमाडौं । लेखकले त्यही ठाउँ नजिक हुर्किदै त्यहाँको समुदाय विशेषको सामाजिक अन्र्तघुलनलाई समावेश गरेको कथाहरुको सङ्ग्रह रहेछ–याम्बुनेर । तेह्र भिन...
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार जिल्लाभित्र भएका डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका प्रमुखसँग गरेको छलफलमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी, काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको ‘हेल्थ सिस्टम नै कोल्याप्स’ भएको तीतो सत्य बोलेपछि उहाँलाई सार्वजनिक रुपमै धन्यवाद नदिइरहन सकिन । सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेका अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन नसकेको, अस्पतालमा बे...
कहिलेसम्म सहने दाइजोको बहानामा यातना
बिहानैदेखि मन कताकता बहकिएको थियो । एक्लोपन, सधैं त बाबाको फोन आउने गर्थ्यो अब त्यो पनि हरायो । हुन त यस धर्तिमा पाईला टेक्न पाउनुलाई नै भाग्यमानी सम्झन्छु । जीवनमा आइपर्ने ती कठिनाइका बाबजुद पनि चुनौतिहरूको सामना गर्दै मानव भएर जन्मनुको अर्थलाई पुष्टि गर्न सक्नु पनि जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो जस्तै लाग्छ । सदा जस्तै यसपालीको दशैंले पनि बिदाईका हात हल्लाउँदै थियो । मन त अझै अमिलो नै थियो । साध...
परम्परागत रुपमा मानिस जंगली युगबाट जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए । मानिसमा जंगली जीवन बडो कष्टमय र दुःखदायी हुन थालेपश्चात समयको परिवर्तनसँगै गाँउ, समाज र समाजका व्यक्तिहरुको सहयोग नभई नहुने आवश्यकता महशुस गर्न थालियो । त्यसैले समाजको निर्माण भयो र मानिस समाजिक प्राणी कहलायो । मानिस समाजमा जन्मन्छ, हुर्कन्छ र समाजमा नै देहत्याग गर्दछ । मानिस समाजभन्दा बाहिर गएर बाँच्न सक्दैन । त्यसैले उसलाई हरपल ...